google inoburitsa Android 12 beta 2 kune inoenderana pixel modhi
Kuru Nhau & Ongororo Google inoburitsa Android 12 beta 2 kune inoenderana Pixel mhando
Google inoburitsa Android 12 beta 2 kune inoenderana Pixel mhando
Varidzi vePixel rimwe danho padhuze nekugamuchira Android 12 se 9to5Google yataura nhasi kuti Google yatanga kuburitsa kunze Android 12 beta 2 kune vashandisi vePixel (Pixel 3 zvichikwira). Iyo yekuvandudza inosanganisira akati wandei echahwo hwakavanzika maficha ari kuwedzerwa kune anoshanda masisitimu neiyo nyowani yekuvaka inosanganisira makumi maviri nemaviri-awa mutsara wenguva unoratidza kuti ndeapi maapplication akawana foni yako & apos; s kamera, maikorofoni, uye nzvimbo data.
Chimwe chiitiko chinowanikwa mubeta nyowani ishoko rinobuda kuti rikuyambise iwe kana app ichiverenga clipboard yako. Sezvo vashandisi vachiwanzoteedzera akakosha manhamba eakaundi kana mapassword pane avo clipboard, zvakakosha kuti uzive kuti ndiani ari kuverenga iyi data. Inguva chete iyo meseji iyi isingaonekwe ndeye apo iyo data pane clipboard iyo anokwanisa kuverenga iyo app yakateedzerwa kubva kune iyo chaiyo app.
Zvakafanana nemaranjisi eOrange uye eGreen anowanikwa pamusoro pechiratidzo chemasero pane iyo iPhone (iyo inoratidza kana app iri kushandisa yako handset & apos; s maikorofoni uye kamera zvichiteerana), Android 12 beta 2 vashandisi vachaona maikorofoni kana kamera zviratidzo kana maapplication ari kushandisa iwo sensors maviri.
Google inoburitsa Android 12 beta 2 Tile nyowani 'yeInternet' muKurumidza Zvirongwa zvinokuratidza nharembozha yako nemaapos zvepamhepo zvinosanganisira zita rewebhu yako yeWi-Fi. Kubaya paiyo Wi-Fi icon kunokutendera kuti ukurumidze kudzima yako Wi-Fi kubatanidza uye zvakare kukuratidza iwe runyorwa rwepedyo maWi-Fi masaiti uye kukupa iwe sarudzo yekudzima / pane yako nhare yenhare. Iyo yekuvandudza inowedzerawo GPay tile kuIkurumidza Zvirongwa kutsiva 'Makadhi & mapasa.'
Kuti uve Android 12 beta tester yePixel yako, vhura iyo Android Beta Chirongwa saiti uye tinya bhatani rinoti 'Wona ako akakodzera zvishandiso.' Tevedza mafambiro uye iwe & apos; iwe uchagamuchira iyo Android 12 beta 2 kugadzirisa OTA. Paunenge iwe wagamuchira chiziviso chekuti iyo yekuvandudza iri pafoni yako, enda kuZvirongwa>System>Yepamberi>Sisitimu yekuvandudza.
Kana yako Pixel iri mutyairi wako wezuva nezuva, ungangoda kumirira yekupedzisira vhezheni yeApple 12 usati waiisa. Mushure mezvose, iyo Android 12 beta 2 yekuvandudza haina kugadzikana uye maapplication aungangoda ebasa kana kutamba anogona kunge asiri kushanda mukugona kwakazara panguva yekuedzwa kwe beta.
Apple inogona kunamatira kune zvakapusa bhatiri zvinhu kuchengetedza iyo iPhone 13 mutengo mukutarisa
Mashandisiro ekushandisa iyo Dual SIM iPhone XS / Max paVerizon, T-Mobile uye AT&T
Ndiyo Samsung Galaxy A52 uye A72 isina mvura here?
Mitambo yakanakisa yeApple Watch
Heano & apos; maitiro ekudzura iyo Samsung Galaxy S5 (SM-G900F) nhanho nhanho
Anoshushikana AT & T mushandisi anotora anodhinda kushambadzira kupopota pamusoro pekunonoka kubatana